Sida loo sameeyo nuqullo keyd ah | War gadget
Sameynta nuqullo nuqul ah waa dhib in dhammaanteen aan la qabsanno haddii aynaan rabin inay si joogto ah u lumiso dhammaan macluumaadka aan kaydsannay qalabkayaga ama kombiyuutarka, inkasta oo aan ka heli karno barnaamijyo kala duwan suuqa oo noo oggolaanaya inaan ka soo kabanno xogta, haddii waxyeeladu tahay mid jireed, gabi ahaanba waa wax aan faa'iido lahayn.
Sannadihii ugu dambeeyay, isticmaaleyaal badan ayaa joojiyay isticmaalka kombuyuutarrada si ay ugu beddelaan mobilada, haddii ay yihiin kiniinno ama taleefannada casriga ah si ay u qabtaan wax kasta oo shaqo ah: laga soo diro emayl ku lifaaqan illaa qorista iyo qaabeynta dukumiinti isku dhafan, in kasta oo xaaladahaas ay had iyo jeer ka fiicnaan doonaan raaxo leh in lagu sameeyo kombiyuutarka. Haysashada macluumaad badan oo ku saabsan qalabka moobiilka waa muhiim in la ogaado sida loo sameeyo nuqullo keyd ah.
Laakiin kaliya maahan aaladdayada moobiilka, laakiin sidoo kale kambiyuutarkayaga, illaa iyo inta aan sii wadno adeegsiga ama waa aaladdayada shaqada ugu weyn. Waxay kuxirantahay nidaamka deegaanka aan isticmaalno, macquul ahaan qaabku wuu ka geddisan yahay, inkasta oo hadaan doorano adeegyada kaydinta daruurta, waan awoodnaa ku soo ururi hal meel, dhammaan labada dukumiinti, sawirro iyo fiidiyowyo lagu abuuray aalado kala duwan.
Nidaam kasta oo deegaan wuxuu naga dhigayaa qashinkeena qalab taxane ah, oo sida caadiga ah guud ahaan badiyaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee samaynta nuqullo nuqul ah. Qodobkan waxaan ku tusi doonnaa xulashooyinka ugu fiican ee waddanka lagu qaban karo hayaan Windows, Mac, iOS iyo Android.
1 Ku kaydso Windows
2 Kaabta Mac
3 Kaabta on Android
4 Kaabta on macruufka
4.1 Talo ku saabsan kaydinta on macruufka
Ku kaydso Windows
In kasta oo ay run tahay in noocyada ka hor Windows 10 ay noo oggolaadeen in aan nuqullo nuqul ka sameysanno, haddana ma ahayn illaa iyo markii la bilaabay noocan, goorta habka loo fulinayo iyaga ma ahayn mid fudud.
Windows 10 wuxuu noo ogolaanayaa inaan sameyno nuqullo nuqul xilliyeed ah xogta aan horey u soo xulnay, maaddaama asal ahaan, waxay mas'uul ka tahay keydinta fayllada horay loogu sii dejiyay nidaamka, sida Dukumintiyada, Sawirada, Fiidiyowyada ...
Si aad u kiciso kaydinta Windows 10 waa inaan ku dhaqaaqnaa talaabooyinka soo socda:
Ugu horreyntii, waxaan ka helnaa qaabeynta Windows 10 iyada oo loo marayo furaha Windows + i amarka, ama iyada oo loo marayo Start menu oo aan gujineyno gawaarida gawaarida.
Marka xigta, dhagsii Cusbooneysiinta iyo amniga> Kaabta.
Khaanadda saxda ah, waa inaan gujineynaa ku dar cutub.
Waxaan doorannaa diskiga meesha aan dooneyno inaan ka dhigno keyd kumbuyuutarkeena.
Si loo habeeyo xogta aan dooneyno in lagu keydiyo keydka, waa inaan gujino Fursado badan. Liiskan dhexdiisa, dhammaan tusaha aan rabno inaan ku keydinno keydkeena kumbuyuutarkeena ayaa lasoo bandhigi doonaa. Waxaan sidoo kale tirtiri karnaa tusaha afafka hooyo ee lagu keydin doono keydka.
Apple waxay na siisay muddo dhowr sano ah suurtagalnimada inaan ka sameysanno nuqullo nuqul ah iyada oo loo marayo codsiga Waqtiga Mashiinka, mashiinka waqtiga, codsi aan mas'uul ka ahayn oo keliya nuqullada dukumiintiyada cusub ee darawalka dibadda, laakiin sidoo kale wuxuu nuqul ka sameeyaa dhammaan faylasha la beddelay oo wuxuu ku kaydiyaa nuqul kale.
Dhamaan nuqulada aad sameyso, waxay u shaqeeyaan sida mashiinka waqtiga. Si kale haddii loo dhigo, haddii aan bilownay ka shaqeynta dukumiinti usbuuc ka hor oo aan tirtirnay sababtoo ah ma aanan jeclaan iyaga oo keliya, waxaan dib uga soo kaban karnaa mar kale markaan u dhaqaaqno taariikhda aan abuurnay si aan awood ugu helno nuqul ka mid ah.
Socda kaydinta nuqulada maalinlaha ah ee dhammaan faylasha la beddelayKuwani waxay qaadataa waqti aad u gaaban in la sameeyo, si kastaba ha noqotee, kan ugu horreeya oo dhan, haddii ay qaadan doonto waqti dheer, maadaama ay sidoo kale kaydiso dhammaan xogta nidaamka, xogta sida qaanuunka ah aan waligeed wax laga beddelin.
Hawlgalka Mashiinka Waqtiga waa mid aad u fudud, sida wax soo saar kasta oo ay naqshadeysay Apple, sidaa darteed in kasta oo hawlgalku u muuqan karo mid adag markii hore, haddana maahan wax dhan soo kabashada faylasha jir waa geedi socod aad u fudud oo dareen leh.
Kaabta on Android
Google sidoo kale waxay na siisaa ikhtiyaar taas waxay noo ogolaaneysaa inaan keydino nuqul keyd ah boosteejadayada, si hadday dhacdo khasaaro, xatooyo ama burbur, ma lihin walaac labalaab ah oo aanan awoodin inaan ka soo kabanno xogta uu ku yaal terminalkeennu.
Kaydinta on Android soo mas'uul ka noqon doona sameynta nuqul ka mid ah dhammaan xogta la keydiyayLaga soo bilaabo ereyada sirta ah ilaa shabakadaha Wi-Fi, oo ay ku jiraan taariikhda wicitaanka. Waxay sidoo kale keydisaa aaladda iyo xogta arjiga, farriimaha, xiriirada, sawirrada iyo fiidiyowyada ...
Si aad u dhaqaajiso hayaan on Android waa inaan fulino talaabooyinka soo socda:
Marka hore, kor ayaan u kacnaa goobaha
Marka xigta, dhagsii Dib u soo celinta iyo dib u soo celinta
Marka xigta, guji Nuqul ka mid ah xogtayda oo waxaan udhaqaajinaa badhanka si terminalku u bilaabo inuu sameeyo keyd dhamaanba xogta ku keydsan ebutekeena.
Ugu dambeyntiina, waxaan ku laabaneynaa menu-kii hore oo guji Koontada keydka ah oo waxaan dhiseynaa koontada aan dooneyno inaan ka sameysano nuqul keyd ah, illaa iyo inta aan ka hayno in ka badan hal koonto oo loo qaabeeyey terminaalkeenna. Kaydinta bartayada 'Android terminal' ayaa lagu keydin doonaa Google Drive, markaa waa inaan haysannaa meel ku filan oo aan ku kaydinno.
Kaabta on macruufka
Apple waxay ka dhigeysaa adeegga kaydinta ee iCloud inaan helno annaga oo ah adeeg aan ku samaysan karno nuqullo keyd ah oo qalabkeenna ah markasta oo aan doonno. Apple waxay bixisaa 5 GB oo boos ah gebi ahaanba bilaash dhammaan adeegsadayaasha leh Aqoonsiga Apple, oo ah meel guud ahaan aan ku filnayn in laga dhigo keydka geynteena.
Xaaladahaas oo kale, illaa iyo inta aanan damacsanayn inaan lacag ku bixino si aan u isticmaalno meel bannaan oo dheeri ah, waan dooran karnaa ku xirmaan iPhone-keena, ama iPad-ka, PC ama Mac oo keyd ka dhig iTunes, si markaa ay dhacdo in iPhone-kayagu uu waxyeello, la xado ama lumo, waxaan had iyo jeer haysan karnaa nuqul ka kooban dhammaan wixii aan kaydsannay.
Kaydintaani waxay ka kooban tahay dhammaantood sawirro, fiidiyowyo, codsiyo iyo dukumeenti kale gudaha terminaalka. Si nuqullo nuqul ah looga sameeyo degmadeena waa inaan ku dhaqaaqnaa tallaabooyinka soo socda:
Marka hore, kor ayaan u kacnaa goobaha.
Gudaha goobaha, guji isticmaaleyaasheena ka dibna riix iCloud.
Markaas ayaan kor u kacnaa Soo celinta oo waxaan dhaqaajineynaa furaha u dhigma.
Hayaan ka samaysan yihiin of our terminal in iCloud iWaxay ku jiraan xogta xisaabaadka, dukumiintiyada, qaabeynta arjiga Guriga iyo dejimaha cinwaankeenna. Nuquladaan waxaa la sameeyaa markasta oo terminal-ku uu ku xiran yahay lacagta hadda socota, la xirayo oo lagu xirayo shabakad Wi-Fi ah.
Sida iska cad, xogta badan ee aan keydinay, boos badan ayaa u baahan doona kaydinta. Haddii aan dib u soo celino keydkeena boosteejada, waxay soo dejineysaa dhammaan xogta oo ay la socdaan codsiyada aan horey u rakibnay.
Talo ku saabsan kaydinta on macruufka
Haddii aan ka hadalno nidaamka qalliinka Apple ee aaladaha gacanta, waa inaan marka hore hal shey ka dhignaa mid cad. Sannad kasta, ragga ka socda Cupertino waxay soo saaraan nooc cusub oo iOS ah oo la jaan qaada dhammaan qalabkii ugu dambeeyay ee suuqa ku dhacay, xitaa noqda la jaan qaadaya moodooyinka ilaa 5 sano.
Markasta oo nooc cusub oo iOS ah la sii daayo, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad sameysid rakibo nadiif ah oo qalabkeena ah adigoon jiidaya xogta codsiyada aan horey u rakibnay, maadaama kuwani ay hoos u dhigayaan khibrada isticmaale waxayna sababi karaan dhibaatooyin xagga qalabka ah. . Marka aan qabanno rakibidda nadiifka ah ee qalabkeenna, WAA INAANAN marna soo celin nuqul hore.
Inta badan barnaamijyadan / adeegyadan waxaa loogu talagalay sidaas maalin walba samee kayd iyada oo aan isticmaaleyaashu ogaan, ikhtiyaar ah in aynaan wax ka beddelin, maadaama aadan waligaa ogeyn goorta ay terminal-kaaga ku dhici karaan qasaaro.
Meesha ay ku fadhiyaan waa inaanay sidoo kale ina khusaynin, maadaama xeer guud, nuqullo nuqul oo cusubi beddeleen kuwii hore, sidaa darteed booskii aan markii hore u qoondeynay si loo fuliyo, lama kordhin doono Illaa aynaan u heellannay qaadashada tiro badan oo sawirro ah ama fiidiyowyo ah.
Unugga aan u isticmaalno sameynta nuqullo keyd ah, waa inaan kaliya u adeegsanaa ujeedadaas, ha u isticmaalin ujeedooyin kale sida kaydinta filimka ama sawirrada isticmaalaha maalinlaha ah. In yar oo aan u isticmaalno diskigaas adag, noloshiisu way sii kordheysaa, oo halis uma geli doonno in nuqulkayaga keydku uu xumaado.
Haddii nooca faylasha aad rabto inaad nuqul ka dhigto aysan ku jirin sawirro ama fiidiyowyo, laakiin ay yihiin dukumiinti keliya, xulashada ugu fiican uguna dhaqsaha badan waxay noqon kartaa isticmaal adeegga kaydinta daruurta, waa adeeg kuu ogolaanaya inaad ka gasho feylashaada sida aad doontana aadna u waafajiso isla markasna kumbiyuutarrada ay ku yaalliin dalabka u dhigani.
Dareenkan, Google Drive waa adeega na siiya meesha ugu banaan bilaashka ah, 15 GB, waana mid ku habboon ficil ahaan barnaamij kasta oo moobiil ah, sidaa darteed waxaan marwalba awood u yeelan doonnaa inaan furno ama tafatirno dukumintiyada si toos ah daruuraha uga dhex marno aaladdayada. Haddii aan wax ka bedelno feylasha kumbuyuutarkayaga, isla markiiba waxaa lagula jaan qaadayaa daruurta, markaa waxaan had iyo jeer haysan doonnaa noocii ugu dambeeyay ee aan wax ka beddelnay markii aan gacanta ku hayno.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida loo sameeyo nuqullo keyd ah
Huawei wuxuu sii wadaa inuu ku sharaddeeyo suuqa bartamaha iyada oo la socota P Smart 2019 cusub